Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 20
Manan-tsaina ve ny biby ary mieritreritra ve izy ireo?
Ny biby sasany dia mampiseho fahaiza-manao mahavariana hahatakatra ny zavatra lazaina amin'izy ireo ary hanao izay lazaina azy ireo toy ny hoe azon'izy ireo. Ny biby dia tsy mieritreritra ny fahafantaran'ny olombelona ny teny, na ny eritreritr'izy ireo, na dia toa miseho mazava aza ny zavatra lazaina amin'izy ireo ary hanao ny maro amin'ireo zavatra notakiana azy ireo. Ny saina dia fitsipika manokana amin'ny olona izay mahatonga azy ary manome fahafahana azy hihevitra ny tenany ho izaho-am-izaho. Ny biby dia tsy manana an'io fitsipika io ary tsy misy na inona na inona amin'ny fihetsiny na ny fitondrantenany manoro hevitra azy ireo fa manana izany izy ireo. Tsy misaina, tsy afaka mieritreritra izy ireo satria ny hevitra dia tsy amin'ny fisian'ny fisainana amin'ny faniriana ihany no azo atao. Ny biby dia maniry ny foto-pitsipika manan-danja sy mibaiko azy ireo, saingy tsy manana eritreritra toy ny biby izy ireo.
Amin'ny heviny hafa noho ny amin'ny olombelona, ​​ny biby dia manana saina. Ny hevitr'ilay biby izay azo lazaina fa manana eritreritra dia ny fandraisana andraikitra eo amin'ny tontolon'ny saina manerana izao tontolo izao, tsy misy fitsipika manokana. Ny biby rehetra, izay tsy eo ambany fitarihan'ny olombelona, ​​dia miasa araka ny toetrany. Ny biby dia tsy afaka manao zavatra hafa noho ny toetoetrany, izay ny biby dia. Ny olombelona dia afaka manatanteraka araka ny natiorany ny biby, na araka ny filàn'ny olombelona tsotra sy ny fomba amam-panao ara-tsosialy na ara-barotra, na mety mihoatra ny biby sy ny olon-tsotra ary manao zavatra masina sy Andriamanitra. Io safidin'ny hetsika nataon'olombelona io dia azo atao satria manana saina na saina izy. Raha manana na mieritreritra ny biby dia ho azo atao ny misafidy ny safidiny. Fa ny biby dia tsy manao zavatra hafa noho ny karazany izay azy, ary mamaritra ny toetra sy ny asan'ny biby. Izany rehetra izany dia ampiharina amin'ny biby ao amin'ny fanjakana na ny toe-batany na ny toe-batany ary rehefa tsy misy fanelingelenana na tonga eo ambany fitarihan'ny olombelona. Rehefa mitondra biby iray eo ambanin'ny fahefany ny olona, ​​dia manova izany biby izany izy amin'ny fampiasany ny fahefany eo aminy. Ny olombelona dia afaka mampihatra ny fiantraikany ara-tsaina amin'ny biby amin'ny fomba mitovy amin'izany amin'ny fampiasany ny herin'ny sainy amin'ny biby ao aminy. Ny faniriana no fototry ny biby, tadidio ny fitsipiky ny maha-olona. Ny faniriana dia ny fiasan'ny saina. Ny faniriana no zava-dehibe izay iasan'ny saina. Ny antony mahatonga ny biby ho voaofana hankatò ny didin'ny olombelona dia satria ny fitsipiky ny faniriana dia hamaly ny asan'ny sainy ary hankatò ny didiny raha mbola mitoetra ao an-tsainy ny ezaka atao amin'ny fitondrana ilay biby. Ny biby dia tsy manao ny fisainana rehefa manatanteraka ny baikon'ny lehilahy iray. Ny biby dia mankatò tsotra izao ny fisainan'ny saina izay mitarika azy. Ho fanoharana izany dia azo lazaina fa tsy misy biby fantatra amin'ny fahazoany sy ny fankatoavana ny baiko izay tsy mitovy amin'ny baiko hafa alohan'ny hanomezana azy. Ny zavatra tsirairay izay ataony dia mitovy amin'ny hatsaram-panahy amin'izay ampianarin'ny olona hataony. Ny toetran'ny saina dia ny drafitra, ny mampitaha, ny niaviany. Tsy misy biby manana fahafaha-manao na fahaizana na planina zavatra iray, hampitahaina amin'ny fanoherana, na hanomboka hetsika ho an'ny tenany na biby hafa. Ny biby dia manao tsikombakomba na mankatò ny baiko satria nampianarina sy nampiofanina izy ireo hanatanteraka sy hankatoavina azy ireo ary izany dia noho ny sainin'ny olombelona natsipy tao amin'ny fanirian'ny biby izay maneho ny heviny amin'ny asa.
Hisy vokany ratsy ve ho an'ny olombelona amin'ny fisian'ny biby an-trano?
Izany dia miankina amin'ny olombelona noho ny ataony amin'ny biby. Ny tsirairay dia afaka manampy ny iray hafa, fa momba ny fanampiana omena na ny fahasimbana atao dia ny fanapahan-kevitry ny olombelona. Ny biby dia manampy amin'ny fifandraisana amin'ny olombelona raha hampianatra sy hifehy ny biby amin-katsaram-panahy ny olona. Ny biby ao amin'ny tanindrazany dia tsy mitaky fanampiana ho an'ny olombelona, ​​fa rehefa mamelona sy mitaiza ny olona no mitondra ny biby eo ambany fitarihan'ny sainy, dia tsy afaka manangona sakafo ho an'ny tenany sy ny tanora intsony ny biby . Avy eo dia ny lehilahy no tompon'andraikitra amin'ny biby; ary rehefa nandray andraikitra tahaka izany dia andraikitry ny lehilahy ny mikarakara sy miaro ny biby. Ny lehilahy dia tsy manao izany satria tian-dry zareo ny haavony sy ny fanabeazana azy, fa ny faniriany hametraka ny biby amin'ny fampiasany manokana. Amin'izany fomba izany no ananantsika biby toy ny soavaly, ombivavy, ondry, osy, alika sy vorona. Ny fikambanana izay manandratra ny vatan'ny biby dia ampianarina amin'ny fampiasana vatana amin'ny fikarakarana biby mba hampiroborobo ny vatan'olombelona amin'ny evolisiona na tontolo hafa. Amin'izany fomba izany dia misy fifanakalozana eo amin'ny biby sy ny olona. Ny biby dia ampianarina amin'ny olona ho an'ny asa izay omeny ny olona. Ny fitsipiky ny fanirian'ny biby dia asan'ny sain'ny olona, ​​ary amin'ny alalan'ny fihetsika toy izany sy ny fihetseham-po toy izany dia aroson'ny fitsipiky ny sain'ny olombelona ny fitsipiky ny fanirin'ny biby, ka amin'ny fotoana lavalava kokoa ny fitsipiky ny faniriana Ny biby dia azo omena amin'ny fanjakana hahafahany mifandray avy hatrany sy mivantana amin'ny saina. Ny olona dia hanatanteraka tsara kokoa ny andraikiny raha manao ny adidiny amim-pahamendrehana sy amim-pifaliana izy fa tsy amin'ny herin'ny toe-javatra sy amin'ny alahelo. Ny olona dia hanampy ny biby raha mihevitra azy ireo amin'ny hazavana voatsinjara fotsiny izy ary hitondra azy ireo amim-pitiavana sy amim-panajana ary hampiseho fitiavana azy ireo; Hanaiky ny faniriany izy ireo amin'izay fomba mahagaga azy. Mba hampisehoana azy ireo anefa, dia tokony hampiasaina ny fikarakarana. Ny fitiavan-tena toy izany dia tsy tokony ho toy ny fisalasalana adaladala sy mahatsikaiky, fa ny fitiavan'ny olona iray ho an'ny fanahy amin'ny zavamananaina rehetra. Raha manao izany ny olombelona, ​​dia hampivelatra ireo biby izy ary hamaly azy amin'ny fomba izay hahatonga ilay lehilahy ankehitriny hieritreritra tsara fa ny biby dia manana faharanitan-tsaina amin'ny heviny amin'ny fananana fahaiza-mandinika. Na dia izany aza, raha toa ny biby dia toa mihetsika lavitra kokoa noho ny tsara indrindra amin'izao fotoana izao dia mbola tsy hanana ny herin'ny fisainana na ny fahaiza-mandanjalanjaina izy ireo.
Ny fifandraisana misy eo amin'ny olombelona sy ny biby dia faharatsiana sy fanararaotana raha ny biby dia entina mivoaka amin'ny sehatr'izy ireo amin'ny alalan'ny olona marary ary natao hameno toerana izay tsy biby, olombelona na avy amin'Andriamanitra. Izany dia atao amin'ny lehilahy na vehivavy izay manandrana manao sampy amin'ny biby biby. Matetika ny alika na saka no voafidy ho amin'izany tanjona izany. Ny biby fiompy dia natao ho an'ny fiderana na fanompoam-pivavahana. Ny olona mahantra dia mivoaka avy ao am-pon'ny olona iray feno haratsiam-panahin'ny adin-tsaina. Ny fanindrahindrana ny biby fiompy dia nentina tany amin'ny fanatanjahan-tena toy ny fananana biby an-tsokosoko amin'ny endriny farany na manokana, ary natao hanao firavaka vita amin'ny firavaka na firavaka hafa, ary manana mpanompo manokana ho an'ny fanadiovana fofona sy famatsiana azy. Amin'ny tranga iray dia nandeha an-tongotra niaraka tamin'ny alika izy ireo na nandroaka azy io tamin'ny fiara manokana ka mety ho ny rivotra madio tsy misy alahelo. Ny biby dia nokarakaraina nandritra ny androm-piainany ary rehefa tonga ny fahafatesana dia napetraka tao anaty vatam-paty lehibe izy; Feno fankalazana ny fombafomba ary nanaraka azy ny mpivavaka sy ny namany tamin'ny fikarakarana manokana ny fasana, izay nandraisana azy ireo tany amin'ny toerana mahafinaritra sy ny tsangambato napetraka mba hahatsiarovana ilay hetsika mampalahelo. Ny biby dia tsy tokony homena tsiny toy izany; Ny fahadisoam-panantenana dia ny mifandray amin'ny olombelona. Saingy ny biby dia naratra tamin'ny hetsika toy izany satria nesorina tao anatin'ny sehatra voajanahary izy ary napetraka ho an'ny sehatra tsy ananany. Tsy azo atao intsony ny miditra indray amin'ilay sehatra izay efa nalaina ary tsy afa-miasa amin'ny fomba mahazatra, ampiasaina ary araka ny tokony ho izy amin'ny toerana nomen'ny olombelona azy. Ny fihetsika toy izany dia fanararaotan'ny fahafahana maneho ny hevitry ny olombelona, ​​izay handratra ny zon'ny marina rehetra ary hitaky amin'ny fanararaotana toy izany amin'ny toerany tahaka izany amin'ny fiainana ho avy. Ny faharetan'ny toerana, ny fandaniam-bola, ny fanimbana ny olombelona hafa amin'ny fanerena azy ireo ho mpanompon'ny biby fiompy, ary amin'ny tsy firaharahiana ny biby amin'ny toerana nomena azy, dia tsy maintsy aloa amin'ny alahelo, fahadisoam-panantenana ary fahasimbana eo amin'ny fiainana ho avy. Betsaka ny sazy henjana ho an'ny olona iray izay manamboatra sampy avy amin'ny biby ary manompo an'io biby io. Ny fihetsika toy izany dia fikasana hanao andriamanitra mety ho andevon'ny bibidia iray, ary ny teti-dratsiny dia tsy maintsy mandray ny tanindrazany.
Eo amin'ny fepetra sasany, ny fiantraikan'ny biby dia tena manimba ny olona sasany. Ohatra, raha misy olona malemy na matory saka na alika taloha dia tsy tokony havela hikasika ny vatana, satria rehefa tsy manana saina na saina ny vatana dia tsy mahatsiaro tena ao amin'ny vatan'olombelona, ​​ny fanetsiketsehana biby Ny vatan'olombelona dia hosoloin'ny alika na saka na biby hafa izay manohina azy. Ny biby dia mikororosy manakaiky na mikitika ny vatan'olombelona, ​​satria mahazo fanahy masina avy amin'izany izy. Porofo izany fa ny alika iray, alika antitra manokana, dia hikorontana hatrany amin'ny vatan'olombelona. Izany no nataony ho an'ny tanjona roa; mba hikorontana, fa indrindra indrindra satria nahazo hery mitarika avy amin'ny vatany izy izay ampiasainy. Mety ho voamarikao matetika fa ny saka dia hifidy olona iray izay matory ary hikolokoloany eo amin'ny tratrany ary mihetsiketsika tanteraka rehefa manangona ny maotisin'ilay olona matory. Raha mitohy io alina io aorian'ny alina, dia hihamalemy sy hihamalemy ny olona mandra-pahatongan'ny fahafatesana. Satria mety hanaisotra ny herin'ny maizina avy amin'ny olona ny biby, tsy tokony hahatonga ny olona hanaisotra biby izany, na hampijaly azy, fa hampiasainy kosa ny fitsarany amin'ny biby, mampiseho amin'izy ireo ny hatsaram-panahy rehetra sy ny fitiavan'ny olona ho an'ny velona rehetra biby; Tokony hampiofana azy ireo amin'ny fampiasana ny fitsipi-pifehezana koa izy, izay hampianatra azy ireo ho toy ny zava-mahasoa sy andraikiny, fa tsy mamela azy ireo hanao izay tiany, satria izy dia kamo loatra na tsy mitandrina mba hampiofanana azy ireo, na noho izy mampiseho adala sy mahatsiravina fampihetseham-po.